Exodus 6 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Otetela Pangasinan Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Uzbek Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
6 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Afei wubehu nea mɛyɛ Farao,+ efisɛ nsa a ɛyɛ den bɛhyɛ no ma wama wɔn kwan akɔ, na nsa a ɛyɛ den bɛma wapam wɔn mpo afi n’asase so.”+ 2 Na Onyankopɔn toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Mene Yehowa.+ 3 Miyii me ho adi kyerɛɛ Abraham,+ Isak,+ ne Yakob+ sɛ ade nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn,+ nanso me din Yehowa+ no de, mamma wɔamfa anhu me.+ 4 Na me ne wɔn yɛɛ apam sɛ mede Kanaan asase a wɔkɔsoɛɛ so sɛ ahɔho no bɛma wɔn.+ 5 Afei mate Israelfo no apinisi,+ nkoasom a Egyptfo de wɔn aba mu no, na m’apam+ no, mekae. 6 “Enti ka kyerɛ Israelfo no sɛ, ‘Mene Yehowa, na meyi mo afi Egyptfo nnesoa ase na magye mo afi wɔn nkoasom mu;+ mede basa a emu ateɛ ne atemmu kɛse na ebegye mo.+ 7 Na mede mo bɛyɛ me man,+ na mayɛ mo Nyankopɔn;+ na mubehu sɛ mene Yehowa mo Nyankopɔn a oyii mo fii Egypt nkoasom mu+ no. 8 Mede mo bɛba asase a memaa me nsa so kaa ntam+ sɛ mede bɛma Abraham, Isak, ne Yakob no so; na mede bɛma mo sɛ agyapade.+ Mene Yehowa.’”+ 9 Afei Mose de nsɛm yi nyinaa too Israelfo no anim, nanso abasamtu ne nkoasom dennen no nti, wɔantie Mose.+ 10 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 11 “Kɔka kyerɛ Egypt hene Farao+ sɛ ɔmma Israelfo no kwan mma womfi n’asase so nkɔ.”+ 12 Nanso Mose ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Hwɛ, Israelfo no mpo antie me,+ na ɛbɛyɛ dɛn na Farao atie me+ a wontwaa m’ano twetia+ yi?” 13 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ wɔmfa n’ahyɛde nkɔto Israelfo no ne Egypt hene Farao anim, na wonyi Israelfo no mfi Egypt asase so.+ 14 Eyinom ne atitiriw a wɔwɔ wɔn agyanom fie: Israel ba panyin+ Ruben mma ne Hanok, Palu, Hesron, ne Karmi.+ Eyinom ne Ruben asefo.+ 15 Na Simeon mma ne Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, ne Saul a ɔne Kanaanni bea woo no+ no. Eyinom ne Simeon asefo.+ 16 Lewi+ mma din sɛnea wɔn mmusua te+ ni: Gerson, Kohat, ne Merari.+ Na mfe a Lewi dii nyinaa yɛ ɔha aduasa ason. 17 Gerson mma ne Libni ne Simei,+ sɛnea wɔn mmusua+ te. 18 Kohat mma ne Amram, Yisar, Hebron, ne Usiel.+ Na mfe a Kohat dii nyinaa yɛ ɔha aduasa abiɛsa. 19 Na Merari mma ne Mahli ne Musi.+ Eyinom ne Lewi asefo no mmusua.+ 20 Afei Amram waree ne papa nuabea Yokebed.+ Akyiri yi ɔwoo Aaron ne Mose+ maa no. Mfe a Amram dii nyinaa yɛ ɔha aduasa ason. 21 Yisar mma ne Kora+ ne Nefeg ne Sikri. 22 Na Usiel mma ne Misael ne Elisafan ne Sitri.+ 23 Afei Aaron waree Aminadab babea Eliseba a ɔyɛ Naason+ nuabea. Akyiri yi ɔwoo Nadab, Abihu, Eleasar, ne Itamar+ maa no. 24 Na Kora mma ne Asir ne Elkana ne Abiasaf.+ Eyinom ne Kora asefo.+ 25 Afei Aaron ba Eleasar+ waree Putiel babea. Akyiri yi ɔwoo Finehas+ maa no. Eyinom ne Lewifo agyanom atitiriw, sɛnea wɔn mmusua te.+ 26 Aaron ne Mose yi na Yehowa ka kyerɛɛ wɔn sɛ:+ “Monhyehyɛ Israelfo sɛ asraafokuw na munyi wɔn mfi Egypt asase so” no.+ 27 Wɔn na wɔne Egypt hene Farao kɔkasae sɛ ɔmma wɔn kwan mma wonyi Israelfo no mfi Egypt no.+ Mose ne Aaron no ni. 28 Afei da a Yehowa ne Mose kasae wɔ Egypt asase so+ no, 29 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Mene Yehowa.+ Nea mɛka akyerɛ wo biara, ka kyerɛ Egypt hene Farao.” 30 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Hwɛ, wontwaa m’ano twetia, ɛbɛyɛ dɛn na Farao atie me?”+